वैकुण्ठ ढकाल शनिबार, पुस २६, २०७६ मा प्रकाशित
स्थानः नोवेल अस्पताल, सिनामंगल ।
समयः १६ः४५ बजे ।
दिनः सन् २०१९को अन्तिम दिन ।
(सिस्टर एक जना डोनर आउनु भयो, अर्को एक जना आउँदै हुनुहुन्छ ।)
दाइः यो फर्म भर्नुहोस न है । ब्लड बैंकमा कार्यरत भक्तपुरे सिस्टरले फारम पंक्तिकार तिर अघि बढाइन ।
व्यक्तिगत विवरण भरेर बुझाएँ । फारम बुझ्दै सिस्टर प्रश्न गर्न थालिन ।
सिस्टरः यो भन्दा अगाडि ब्लड डोनेनशन गर्नु भएको छ ?
पंक्तिकारः छ ।
सिस्टरः कति पटक ?
पंक्तिकारः ५/६ पटक ।
सिस्टरः पछिल्लो पटक दिएको कति भयो ?
पंक्तिकारः धेरै भयो, ४/५ वर्ष भयो होला कि ?
सिस्टरः गएराति ड्रिक्सं गर्नुभएको छ ?
पंक्तिकारः छैन । (मेरो लागि यो प्रश्न जरुरी थिएन)
सिस्टरःः खाजा खानु भयो नि ?
पंक्तिकारः खाएर आएको ।
सिस्टरः गएराति निदाउनु भएको थियो, अनिदो त हुनुहुन्न ?
पंक्तिकारः मस्तले निदाएको छुु ।
सिस्टरः कुनै मेडिसिन लिनुभएको छ ?
पंक्तिकारः छैन, सिटामोल समेत नखाएको धेरै भयो ।
यी प्रत्येक सवाल जवाफको अर्थ छन, हुनु जरुरी छ । एक जना रक्तदाता हरेक हिसाबले फिट हुनु जरुरी छ । नबुझ्नेहरुका लागि यत्तिका सवाल जवाफ के का लागि भन्ने हुन सक्ला । तर रक्तदाताले रक्तदान गर्नु २४ घण्टा अघि र पछि पनि मद्यपान गर्नुहुन । अनिदो र खाली पेट हुनु हुन्न । अन्य औषधिहरु खाएको हुनु हुन्न र सामान्यतया तीन महिना भन्दा कम समयमा रक्तदान गर्नु हुन्न ।
प्रश्नोत्तर सत्र सकियो, भित्र गएर ब्लड प्रेसर जाँच गरिन सिस्टरले तल हल्ला बढी रहेछ । पानी खाएर एकैछिन आराम गर्नुहोस ।
केहीबेर पछि, ल दाइ बेडमा पल्टिनुहोस आरामले । जुत्ता खोल्न मन छैन भने, यो पेपर राख्नु होला ।
म आज चाहिं खोल्दिन । नखोली रगतदान गर्न तयार भएँ ।
बाया पाखुरा अघि सारें, मुठी कसेर लामो सास फेर्नु भनेर सिसोले च्वास्स घोचिन । हल्का दुख्यो ।
अब मुठ्ठी खोल्नुहोस र हात चलाउनुहोस ।
केहीबेरमा ४५० एमएल रगतले पोका भरियो । सियो निकालिन । एक छिन आराम गर्न भनिन ।
यसको पनि अर्थ छ, रक्तदान गर्ने वित्तिकै उठ्दा रिंगटा लाग्छ । यसको हुनुको मतलब शरीरमा हेमोग्लोविनको कमी हुँदा हो ।
अघिल्लो महिनाको अन्तिम दिनको अघिल्लो दिन, एक सहकर्मी मलिन अनुहारमा काम गरिरहेकी थिइन । अनुमान लगाएँ पिरियडको ‘पीडा’ होला । यो विषय महिलाहरु नितान्त ‘निजी’ कुरा ठान्छन, खुल्दैनन ।
त्यसपछि उनी अफिस आइनन, एक हप्ताभन्दा धेरै नै भए पछि म्यासेन्जरमा सञ्चो बिसन्चो सोधें । अस्पताल भर्ना भएको जानकारी आयो । स्वास्थ्य लाभको कामना गरें, काममा लागें । कार्यालय प्रयोजनको लागि बनाईएको फेसबुक समूहमा अर्का सहकर्मीले उनलाई रगत चढाउनु पर्ने जानकारी अघिल्लो रात नै छाडेका रहेछन, भोलिपल्ट विहान म्यासेज गरेर रगत दिन मिल्ने अवस्थामा रहेको जानकारी गराएँ । त्यो बेला आवश्यक परेन वा अन्यत्रबाटै व्यवस्थापन भयो ।
सन् २०१९ को अन्तिम दिन, फेरि रगतको कुरो आयो । अनि लाग्यौं, अस्पताल । सहकर्मी दिवाकर र म दुबै जना रगत दिएर कार्यालय फर्कने योजन थियो । तर पाँच बजेको बुलेटिनका लागि अर्को साथी नआइपुग्ने भएकाले दिवाकर मलाई सिनामंगल छाडेर, कार्यालय मध्यवानेश्वर फर्किए ।
अर्को दाताका रुपमा बोमलाल नोबेल अस्पताल पुगे । मेरो भर्खरै रगत निकाल्न शुरु गरिएको थियो । केही थान तस्बीर खिचेर, बोम खाजा खान निस्किए, दिनभर यताउता गर्दा खाना, खाजा खान भ्याएका रहेनछन बोमले । बोम खाजा खाएर आउँदा मेरो रगत निकालिसकेको थियो ।
रक्तदान गर्दाको आनन्द र आत्मसन्तुष्टीका विषयमा साझा बुझाइ रह्यौ । यसअघिका अनुभवहरु आदन प्रदान पनि गरियो ।
यसअघिको रक्तदान गर्न जाँदाको नमीठो अनुभव छ, त्यो पनि यहाँ उल्लेख गरिहालौं ।
समयः बिहान ११ बजे ।
स्थानः प्रसुतिगृह, थापाथली ।
रक्तदाताको रुपमा मेरो प्रवेश ।
गाउँको आफन्त सुत्केरी हुन लागेको र ‘ए पोजेटिभ’ समूहको ताजा रगत चाहिएको साथीबाट जानकारी पाएपछि म रगत दिन तयार भएको थिएँ ।
अस्पताल पसेदेखि नै त्यहाँका कर्मचारी र व्यवस्था देखेर दिगमिग लागिसकेको थियो । सरसफाइको अवस्था नाकलाई गाह्रो भएबाट नै थाहा हुन्थ्यो । करिब आधा घण्टाको पर्खाइपछि ‘ब्लड ब्याग’ बोकेर एक कर्मचारी आईपुगे । फारम भरें । त्यसपछि प्रेसर जाँच भयो । प्रेसर सामान्य नै देखियो ।
‘माथि सुत्नुहोस’ कर्मचारीले भने ।
‘जुत्ता लगाएर सुतौं कि खोलेर ?’ मेरो प्रश्न ।
‘घरमा सुत्दा के गर्नुहुन्छ ?’
‘मन लागे खोल्छु, मन नलागे खोल्दिन । मेरो घर, मेरो कोठा, मेरो खाट, मेरो मर्जी ।’
‘यो अस्पताल हो । यहाँ तपाईंको हैन, मेरो मर्जी चल्छ ।’
‘हो है’ जुत्ता खोलेर भुँईमा राखें र सोधें, ‘मोजा पनि खोलूँ कि ?’
‘पर्दैन सुत्नुहोस’, कर्मचारीले दिक्क मान्दै भने ।
‘होइन, म उठि–उठि रक्तदान गर्छु ।’
सुत्नको लागि बेड गतिलो थिएन । हुन त म आफैं पनि फोहोरी थिएँ । तैपनि मेरो सेतो रंगको हाफ ज्याकेटमा, बेडको फोहोर सर्लाजस्तै थियो ।
उसको अस्पताल, उसकै मर्जी ठानेर उत्तानो परेर पल्टिदिएँ ।
‘हात दिनुहोस् ।’ उनले भने ।
मैले देब्रे पाखुरा अघि बढाएँ । डिटोल पनि नदली च्वाँस्स घोचिदिए । चौथो पटक रक्तदान गर्दै थिएँ । तर त्यसदिन जस्तो कहिल्यै दुखेन ।
‘सर, कति वर्ष भयो यो काम गर्न थालेको ?’ सोधें ।
‘२० वर्ष ।’
‘मलाई त त्यस्तो लागेन ।’
‘२० वर्ष काम गरेको मानिसले पनि यस्तो दुखाउँछन् त ?’
उनले जवाफ दिएनन् ।
पाइप हुँदै रगत ब्यागमा पुग्यो । ती कर्मचारी पनि बाहिरिए ।
केहीबेरमा सेतो एप्रोन लगाएकी एक अधबैंशे महिला आइन् ।
रगत आधा पोका भएको रहेछ । यसो हल्लाइन, केहिबेरमा भरियो ।
पाखुराको सियो निकालिन् । रगत सानो शिशीमा खन्याइन् ।
‘किन शिशीमा खन्याउनु भएको ?’
‘एड्स जाँच गर्न ।’
‘के थाहा, तपाईं बाहिर–बाहिर नचाहिँदो काम गरेर रगत दान गर्न आउनु भा’छ कि !’
उनी मुख र हात एकसाथ चलाइरहेकी थिइन् । सियोमा कभर लगाउने क्रममा उनको हात चिप्लियो । औंलामा घाउ भयो र केही थोपा रगत चुहियो ।
‘सिस्टरलार्ई पनि मलाई जत्तिकै दुख्यो होला है ?’
‘यत्रो सियोले घोच्दा दुख्दैन त ?’ उनको अनुहार अमिलो भयो ।
‘औंला मात्रै दुखेको भन्ठान्या होला, अब तपाईंको जीवन नै सकियो नि ।’ मैल आफूलाई सकेसम्म गम्भीर देखिकाएर भनें ।
‘हँ, कसरी ?’ उनी आत्तिएको अनुहारबाटै देखिन्थ्यो ।
‘मलाई एड्स लागेको छ । आफू मर्ने भएपछि अरुलाई किन बाँच्न दिनू भनेर रगत दान गर्दै हिड्छु । आज दुई जनालाई मार्न सफल हुने भएँ ।’
‘लाज लाग्दैन त्यसो भन्न ।’ उनी हत्तारिँदै भित्र गईन् । धारो खोलिन्, डिटोलले हात धोईन् । ‘साँच्चै हो र भाइ, एड्स लागेको मानिस पनि रगत दिन हिँड्छन त ?’
‘हिंड्छन् नि, आफू बाँचे पो अरुलाई बचाउने, आफू नै मर्ने भएपछि अरुलाई पनि सँगै लिएर जानु परेन ? एउटै रोगले मरेपछि माथि पुगेपछि सँगै परिन्छ कि !’ मैले ठट्टाको भाषामा भनें ।
ती महिलाको अनुहार हेर्न लायकको थियो । उनी छट्पटाएको निधारमा चिटचिटाएको पसिनाबाटै थाहा लाग्थ्यो ।
रगत जाँच सकियो । उनले लामो सास फेरिन् ।
सबै रिपोर्ट ठीक थियो । एचआईभी नेगेटिभ देखियो ।
‘भाइ पनि मान्छेलाई त्यस्सै अत्याउने? सबै ठीक रहेछ त !’ उनको अनुहारमा खुशीको लहर दौडियो ।
‘हो र दिदी ? एड्स सुन्ने बित्तिकै सातो जाने मान्छे अरुलाई चाहिं एड्स लागेको सजिलै शंका गर्ने त ? विरामीलाई ताजा रगत दिने भएर सबै चेक गर्नुपर्छ भन्नु सक्नु हुन्नथ्यो ?’ सिधै एड्स जाँच्ने रे ?‘तपाईंहरु जस्तो स्वास्थ्यकर्मीले त नम्र बोल्नुपर्छ । शब्द–शब्द तौलिएर बोल्नुपर्छ । म त बुझ्ने मानिस नै हुँ । त्यही भएर तपाईंको बोली र व्यवहारले कुनै असर गरेन । तर रगत दिन आउने सबै मानिसलाई एड्स रोगीको जस्तो व्यवहार नगर्नुहोला ।’लाग्यो, उनीलाई सम्झाउने सही मौका पाए ।
सन् २०२० को पहिलो दिन ‘धेरै धन्यवाद’ भनेर उनै सहकर्मीले म्यासेज छाडेकी रहेछिन् । आत्मविश्वासी बन, अरु जिम्मेवारी अभिभावक र साथीहरुको भनें, उनले हवस भनिन् ।
शरीरमा रगतको कमी हुनुको कारण के रहेछ ? उनको जवाफ अझैसम्म किन हो भन्ने पत्ता नै लागेको छैन ।
ल केही हुन्न, चाँडो निको भएर फर्क । यत्ति भनेर आजको लागि सम्वाद सक्काएँ ।
वैज्ञानिकहरु असम्भव लाग्ने सबैजसो कुरालाई सम्भव बनाउन लागिरहेका छन् । हरअसम्भवलाई सम्भव पार्छ विज्ञानले भनिए पनि वैज्ञानिकहरुले हालसम्म कृत्रिम रगत बनाउन सकेका छैनन, जसले गर्दा एक व्यक्तिबाट रगत निकालेर अर्को व्यक्तिलाई दिनुको विकल्प छैन । यही कारण हो, रक्तदान गर्ने ।
रगतले शरीरका हरेक अंगलाई आवश्यक पर्ने अक्सिजनदेखि पौष्टिक तत्व ढुवानी गर्ने काम गर्छ । यही भएर मानव शरीरमा रगत नभइ हुन्न । तर, विभिन्न कारणले मानव शरीरमा रगतको अभाव हुने गर्छ । यस्तो बेला अरुबाट रगत निकालेर लिन सकिन्छ ।
एउटा स्वस्थ व्यक्तिबाट लिइएको रगतलाई प्राविधिक रुपमा परीक्षण गरी आवश्यकता अनुसार बिरामीलाई उपलब्ध गराइन्छ । शल्यक्रियाका क्रममा, दुर्घटना वा चोटपटकमा, सुत्केरी गराउँदा, विभिन्न रोग (पेप्टिक अल्सर, कलेजो र फोक्सोका रोगहरु) का विरामीलाई रगत आवश्यक पर्छ । यस्तै, क्यान्सरका रोगीहरु, रगतसम्बन्धी रोगहरु (हेमोफेलिया, एनिमिया, थेलेसिमिया) भएका विरामी, जलेका विरामीलाई पनि रगत दिनुपर्ने हुन्छ ।
रगतमा हुने तत्वहरुको काम फरक–फरक हुन्छ । रातो रक्तकोषले फोक्सोबाट अक्सिजनलाई शरीरका कोषहरुमा पु-याउने र कोषबाट कार्बनडाइअक्साइड फिर्ता ल्याउने काम गर्छ । सेतो रक्तकोषले रोगसँग लड्ने र शरीरको प्रतिरक्षा गर्छ । यस्तै, प्लेटलेट्सले रक्तस्राव भएमा रगत जमाउन मद्दत गर्छ । रगत नभएमा मानव मस्तिष्क ४ मिनेटमा र मुटु ६ घण्टामा निस्क्रिय हुन्छ ।
रगतमा सेल (कोष)हरुको हिस्सा करिब ४५ प्रतिशत हुन्छ भने बाँकी प्लाज्मा (विभिन्न खालका तरल पदार्थ) हुन्छ । ब्लड बैंकले सेल पार्ट मात्रै चाहिने विरामीका लागि सेल पार्ट उपलब्ध गराउँछ । प्लाज्मा चाहिनेलाई प्लाज्मा । छुट्टै स्पेसन मेसिनहरुबाट ती पार्टलाई छुट्याइन्छ । त्यसका लागि विभिन्न प्राविधिक चरण पार गर्नुपर्ने हुन्छ । रगतको सेलहरुमा राता रक्तकोष (रेड ब्लड सेल– आरबिसी), सेता रक्तकोष (ह्वाइट ब्लड सेल– डब्लुबिसी), न्युट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट र लिम्फोसाइट हुन्छन् । त्यसैगरी, प्लेटलेट्स पनि सेलहरुमै हुन्छ ।
रक्तदान भ्रम र यथार्थ
पहिलो पटक रक्तदान गर्न जान लागेको भन्दा मेरो आमाले भन्नु हुन्थ्यो, यस्तो दुब्लो मान्छेले रगत दिन सक्छस, निकै कमजोर हुन्छस भन्नु हुन्थ्यो । सामान्य तरिकाले सोच्दा यो कुरा सही नै हो झैं लाग्थ्यो किनकी सामान्य चोटपटकमा थोरै रगत बग्दा पनि निकै गा¥हो हुन्थ्यो । तर यी सबै भ्रम हुन भन्ने बुझ्नको लागि धेरै समय लाग्यो । स्कूले शिक्षामा यी कुराहरु राम्रोसँग पढ्न पाइएको थिएन । शरीर कुन समूहको रगत छ भन्ने थाहा पाउन पनि निकै समय लाग्यो । अझै पनि कति मानिसलाई आफ्नो रक्तसमूह थाहा छैन । रक्तदान गर्दा कमजोर भइन्छ भन्ने नै छ ।
मानव शरीरमा रगत निश्चित अनुपातमा हुन्छ । पुरुषमा प्रतिकेजी ७६ मिलिलिटर र महिलामा प्रतिकेजी ६६ मिलिलिटर रगत हुन्छ । साथै, हरेक मानिसलाई प्रतिकेजी ५० मिलिलिटर रगत भए पर्याप्त हुन्छ । प्रतिकेजीमा पुरुषमा २६ मिलिलिटर र महिलामा करिब १६ मिलिटिर रगत जगेडामा हुन्छ । तसर्थ, एउटा स्वस्थ व्यक्तिले प्रतिकेजीमा ८ मिलिलिटर रगत दान गर्दा फरक पर्दैन भन्ने मान्यता छ । यसलाई यसरी पनि बुझौं सामान्यतया एउटा व्यक्तिको शरीरमा छ लिटर (करिब दश युनिट) रगत उत्पादन हुने गर्दछ । जबकी रक्तदानको समयमा भने एक युनिट अर्थात ४७० मिलिमिटर रगत मात्र निकालिने गरिन्छ । त्यो भनेको शरीरमा भएको सबै रगतको १२ देखि १४ प्रतिशत मात्र भएकाले रक्तदानका क्रममा त्यसरी रगत निकाल्दा व्यक्तिलाई भने कुनै हानी गर्दैन । रक्तदान गर्नाले अन्य व्यक्तिको जीवनमात्र बच्दैन, रक्तदान गर्ने व्यक्तिको शरीर समेत स्वस्थ रहन्छ ।
रक्तदानसँग जोडिएका भ्रमका कारण धेरै मानिस रगत दान गर्न हच्किन्छन् । तर, रक्तदानसँग सम्बन्धि अफवाहसँग रगतदान गर्ने व्यक्ति डराउनुपर्दैन । ब्लड बैंकले चिकित्सा विज्ञानले प्रमाणित गरिसकेको प्रक्रियाहरुलाई अपनाएर, परीक्षण गरेर स्वस्थ व्यक्तिबाट मात्रै रगत निकाल्ने काम गर्छ । जाँच प्रक्रियामा सफल नहुनेबाट ब्लड बैंकले रगत निकाल्ने काम गर्दैैन । त्यसैले कुनै व्यक्तिलाई रगतदान गर्न डराउनुपर्ने आवश्यकता छैन ।
कतिपय मानिस आफैं डेडअक्कले बुद्धि लागाउँछन र आफूसँग पर्याप्त रगत छैन भनेर रक्त दानका लागि तयार हुँदैनन । यी भ्रमहरु हुन् । रगत निकाल्न मिल्ने अवस्था नभए स्वास्थ्यकर्मीले नै रगत निकाल्दैनन् । रगतदानका लागि व्यक्ति सक्षम छैन भने उनीहरुले जति इच्छा गरे पनि रगत निकालिँदैन ।
स्वस्थ्य व्यक्तिले १८ वर्षदेखि ६० वर्षको उमेरमा जहिले पनि रगतदान गर्न सक्छन् । हरेक ३–३ महिनाको फरकमा रगतदान गर्न सकिन्छ । किनकी एउटा व्यक्तिको शरीरमा रगत निर्माण भएको एक सय २० दिन भित्र उक्त रगत स्वत नष्ट हुने गर्छ । जबकी सोही रगत अरुलाई दान गर्दा व्यक्तिको शरीरमा छिटो छिटो रगतको उत्पादन हुने गर्दछ ।
एउटा बोनम्यारोले एक सेकेन्डमा एकदेखि दुई मिलियन रातो रक्तकोषिका निर्माण गर्ने हुँदा रक्तदान गरेको २४ घण्टाभित्रै एउटा व्यक्तिको शरीरमा पुनः निर्माण भैसक्छ । र, व्यक्ति पुरानै अवस्थामा फर्किसकेको हुन्छ ।
म रक्तदानको लागि नोबेल अस्पतालको ब्लड बैंकमा एक घण्टा बस्दा दशौं फोन आए, रगतकै लागि । तर त्यहाँ आवश्यकता अनुसारको रगत भेटिएको थिएन । फोन उठाउँदै ती बहिनी अँ हेर्नुहोस न त्यो त छैन, हामीसँग यो चाहिं छ । यसले कुनै पनि विरामीले भन्ने वित्तिकै रगत पाउने अवस्था छैन । नेपालमा पछिल्लो समय सवारी दुर्घटनामा मात्रै परेर दैनिक सात जनाको मृत्यु हुन्छ, कयौं घाइते हुन्छन । उनीहरुलाई रगत चाहिँदो, कयौंको शल्यक्रिया हुन्छ, रगत चाहिन्छ । तर हामी स्वस्थ मान्छे भ्रम पालेर विना काम रगत खेर फालिरहेका छौं । तसर्थ खेर जाने रगत दान गर्दा, अरु कसैको ज्यान बच्छ भने किन रक्तदान नगर्ने ?